Fijerena Akaiky Ny Herisetra Ifanaovan’ny Sekta Ao Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2013 10:44 GMT
Tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina tao Rawalpindi taorian'ny fifandonan'ny vondrona Siita sy ny Sionita. Sary nalain'i Muhammad Majid Rashid. Fizakàmanana Demotix (16-11-2013)
Nandrava an'i Pakistana indray ny herisetra ifanaovan'ny sekta, satria nipoaka tao an-tanànan'i Rawalpindi, any avaratr'i Pakistana tamin'ny 15 Novambra 2013 teo ny fifandonana teo amin'ny vondrona Sionita sy Siita. Vokany, 11 no maty raha maro hafa kosa no naratra mafy, nantsoina ny tafika ary napetraka ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina.
Ashura tamin'izay – ilay andro iray hisaonan'ny Vondrom-piarahamonina Siita – no nitrangàn'ny herisetra tao Rawalpindi. Nivadika ho herisetra henjana ny raharaha rehefa injay nifamely ireo mpianatra avy ao amin'ny seminera iray sy ireo mpikambana avy amin'ilay filaharan'ireo mpisaona tamin'ilay Ashura. Nanoratra ny fitantaràna avy amin'ny olona iray nanatri-maso ny bilaogera Sarah Khan ao amin'ny Let Us Build Pakistan (LUBP) (Ndeha Isika Hanorina An'i Pakistana) :
Araka ny filazan'ny nanatri-maso, naniratsira an'i Imam Hussain fa nankalaza kosa an'i Yazid ny ‘mollah’ mpitari-pivavahana tao amin'ny maoske iray nandritra ny toriteniny rehefa Zoma. [..] Nampisahotaka ireo mpisaona nitandahatra ny kabary nandratra nataon'ilay “mollah”. [..] Mbola namerina ny toriteniny feno fihantsiana ihany ilay “mollah’ taorian'ny namitàny ny vavaka sady namerina izay nolazainy tery aloha. Hitan'ireo mpisaona (Siita sy Sionita) ho sarotra ny handefitra amin'ity “mollah” (Deobandi) ity ka natombony ny fanozongozonany ny fefy teo ivelan'ilay maoske ho fanoherana ireo fanehoankevitra ireo. Tanatin'izany fotoana izany, nisy olona avy any anaty maoske nitoraka vato voalohany an'ireo mpisaona nanozongozona ilay fefy. Nitohy tamin'ny tifitra avy eny an-tafon'ilay maoske izany vato izany. Niteraka sahotaka ilay tifitra ary nanomboka nihazakazaka ny olona. [sic]
Niharatsy ny toe-draharaha rehefa injay nifanakalo tifitra ny andaniny sy ny ankilany, nandoro fivarotana, nanimba tsena sy trano ary dia nametraka ny fandraràna tsy hivezivezy amin'ny alina ny manampahefana no sady nanambara ny fepetra araka ny Andàlana faha-144, izay mandrarà ny tsy hivorivoriana manomboka amin'ny olona dimy no mihoatra. Natsahatra tamin'ny 18 Novambra ilay fandraràna tsy hivezivezy amin'ny alina, marobe ireo nanao hadalàna no voatily ary efa an-dàlana ny fanadihadiana araka ny lalàna mikasika ireo fifandonana ireo, saingy mbola hendratsendratra ny rehetra ao Pakistana.
Andro iray monja taorian'ny korontana tao Rawalpindi, nipoaka ny herisetra teo amin'ireo vondrona Siita sy Sionita tao an-tanànan'i Multan, faritanin'i Punjab, naharatràna olona marobe. Tahakahaka izay ihany, nopotehan'ireo tsy mpino ny maoske iray sy toeram-pivarotana tao amin'ny tanànan'i Chishtian taorian'ny niantsoana ny tafika.
Nahafatesana olona telo ireo fifandonana feno herisetra tao Kohat any Avaratra Andrefan'i Pakistana ; napetrak'ireo manampahefana tao ihany koa ny fandraràna tsy hivezivezy amin'ny alina sady nantsoiny ny tafika. Ny 19 Novambra, Syed Shabbir Hussain Shah, manampahefana ambony iray avy ao amin'ny Oniversiten'i Gujrat, no maty nisy nitifitra, ary nampifandraisina tamin'ilay korontana tao Rawalpindi ihany koa ny famonoana azy.
Raha izany rehetra izany no mitranga, ny Praiminisitra Nawaz Sharif kosa mbola manao fitsidihana ofisialy any Sri Lanka sy Thailand ka nanakianana ny governemantany izay vao haingana no nofidiana. Ho setrin'izay, Nawaz Sharif niampanga ny media sosialy no nanao ‘lalao maloto’ nandritra ireo fifandonana.
Ny 22 Novambra, notafihan'ireo andian'olona mpikatroka avy amin'ny Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ireo Siita tao Karachi tamin'ny alàlan'ny fanapoahana baomba in-droa nisesy ary nahafatesana olona sivy sy naharatràna 28 hafa. Ambaran'ny TTP fa ry zareo no tompon'antoka tamin'ireo fanapoahana baomba, ao anatin'ny ezaka hampitoviany ny isan'ny voa tao Rawalpindi, ary mbola nivoady hanao fanafihana hafa ry zareo.
Mpanao gazety, mpanolotra fandaharana no sady bilaogera i Mansoor Ali Khan (@MansoorGeoNews) no nibitsika sary iray ahitàna ilay namany maty tamin'ireo fipoahana tao Karachi :
Mpiara-miasa iray aminay – Salik Ali Jafferi #TeamGeo - nafoy noho ny asa fampihorohoroana androany Mandria Am-Piadanana pic.twitter.com/8mMMwvUl8S
— Mansoor Ali Khan (@MansoorGeoNews) 22 Novambra 2013
Herisetra ifanaovan'ny sekta
Any amin'ny Silamo, Siita sy Sionita no tena ampahany roa lehibe. Nandritry ny volan'ny Muharram, misaona ny naha-maritiora ny zafikelin'ny Mahometa mpaminany, Imam Hussain, ary ny fianakaviany sy ireo mpanara-dia azy tamin'ny ady tao Karbala ireo Silamo Siita. Taorian'ny nahafatesan'ny Mohameta mpaminany, izay nitarika ffifandirana momba izay ho kalifa handova an'i Mahometa no nanomboka ny fifandirana teo amin'ny Siita sy ny Sionita. Izay fifandirana izay dia mbola mitoetra hatramin'ny anio, ary io no antony mahatonga ny resaka filaminana ho laharam-pahamehan'ny governemanta ao Pakistana mandritry ny Muharram.
Manaraka ny asa fampihorohoroana dia ny resaka sekta no fanamby iray hafa atrehan'i Pakistana, indrindra indrindra fa tato anatin'ny taona vitsy. Ireo vondrona mpankahala Siita, toy ny Lashkar-e-Jhangvi, Lashkar-e-Taiba/Jamaat-ud-Dawa, Sipah-e-Sahaba Pakistan sy Ahle-Sunnat Wal Jamaat dia inoana fa tao ambadik'ireo famonoana Siita, raha maro amin'ireo vondrona no misy ifandraisany amin'ny Taliban. Jamaat-ud-Dawa dia nambaran'ny Firenena Mikambana ho vondrona mpihoko, toy ny an'ilay minisitry ny atitany fahiny tao Pakistana, ny Loholona Rehman Malik, Lashkar-e-Jhangvi dia inoana ho ao andamosin'ny 80 isan-jaton'ireo fanafihan'ny mpampihorohoro ao amin'ny firenena.
Taorian'ny herisetra tao Rawalpindi, Muhammad Shahbaz Zahid (@shahbazzahid), mpamokatra fandaharana ho an'ny fahitalavitra, sady nanakiana ireo fitafy voarara, no nibitsika hoe :
Tokony hanalavitra ny tenany avy hatrany amin'ireo fitafy voarara ny sionita silamo ssp/aswj mpandàla fandriampahalemana raha toa tsy mbola nanao izany.
— Shahbaz Zahid (@shahbazzahid) 17 Novambra, 2013
Tanaty tsotsori-mamba isarahana, niala tamin'ny Vondrompiarahamonina Hazara tao Balochistan, Atsimo Andrefan'i Pakistana, ireo vondrona mpankahala Siita. Nolavin-dry zareo ny handevina ireo havan-tiany namoy ny ainy vokatry ny fipoahana iray nahatsiravina tao Quetta , renivohi-paritanin'ny Balochistn, tamin'ny Janoary teo, izay ny Lashkar-e-Jhangvi no nilaza ho tomponandraikitra taty aoriana kely.
Hetsi-panoheran'ireo Silamo Siita. Sary an'i ppiimages. Fizakàmanana Demotix (11-01-2013).
Ny Pakistan Students Blog (Bilaogin'ny Mpianatra Ao Pakistana), rehefa nanoratra mikasika ilay famonoana Siita Silamo maherin'ny 100 tao Quetta tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity, dia nitaraina hoe :
Tsy izao no voalohany nanaovana ny Siita Silamo ho lasibatra. Tamin'ny 2012 fotsiny, efa nanakaiky ny 500 ireo Siita Silamo no maty lasibatry ny famonoana tao Pakistana. Hatramin'ny 1963, vinavinaina ho 20.000 raha kely indrindra no isan'ireo Siita nisy namono tao Pakistana, ny ankamaroan'ireo dia maty nisy namono tany amin'ny fiandohan'ny taona 1980. [sic]
Na inona na inona nitranga tao Rawalpindi, Karachi na Quetta, ary tsy raharahantsika izay hoe iza no meloka ao andamosin'ireny, fa tsy maintsy manao izay tratry ny ainy ny governemanta mba hiantohana fitoniana ho an'ny sekta tsirairay, na io Siita, na io Sionita, raha tsy izany dia hiverina hatrany ny tantara. Araka ny nanoratan'i Qurat-ul-Ain Fatima azy ao amin'ny bilaoginy :
Satria ny tafika misafo manerana ny arabe rehetra ao an-tanàna miezaka mba “hitandro filaminana” , manao ny fanambaràny manokana ireo tsy matianina amin'ny resaka media sosialy mba hanamarinany an'itsy sary itsy na iroa ho porofo ilazàna fa “Siita” na “Sionita” ilay nahavanon-doza. Ny endrika maha-olona amin'ilay tranga mahaontsa sy ny fiantraikany maharitra dia tsy takatry ny sain'ny tsirairay. Ny fironana dia maneho fa ho adinontsika vetivety iny zava-doza iny vantany vao tafaverina ny fandriampahalemana vonjimaika.[sic]